अमिताभ बच्चनका ७० दशकका ५ सुपरहिट फिल्म, युट्युबमा :: Setopati
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, वैशाख ६
अमिताभ बच्चन। यो नामलाई परिचयको आवश्यकता छैन। ७७ वर्ष पुगेका अमिताभका बारेमा नयाँ पुस्तालाई पनि खास भनिरहन जरूरी छैन। १९७० दशकमा हिन्दी फिल्म क्षेत्रमा चर्चाको शिखर चुम्न सफल उनको दबदबा आज पनि उत्तिकै छ।
यिनै अमिताभका त्यो जमानका पाँच चर्चित फिल्म हामीले यहाँ राखेका छौं।
अमिताभ 'बीग बी' बन्ने यात्राका सुरूवाती कदमका यी फिल्म कुनै कमाइमा सुपरहिट छन्, कुनै उनको अभिनयमा सुपरहिट छन्।
जंजीर (१९७३), निर्देशकः प्रकाश मेहरा
'जंजीर' अमिताभको करिअरकै महत्वपूर्ण फिल्म थियो। यही फिल्मबाट उनले 'एंग्री यङ म्यान'को विशेषण पाए। यसअघि उनी सहायक अभिनेताका रुपमा चर्चित थिए।
'जंजीर'को मुख्य पात्र विजय खन्ना (अमिताभ) इमानदार र जुझारु प्रहरी हुन्। जहाँ पोस्टिङ हुन्छ त्यहाँको गुण्डागर्दी र गैरकानुनी काम रोक्ने उनको शैली आक्रामक छ। यही शैलीले उनलाई अपराधीहरुको नजरमा आँखाको कसिंगर बनाइराख्छ।
नयाँ पोस्टिङ भएको ठाउँमा पनि उनले यही शैली अपनाउँछ। यही क्रममा शेर खान (प्राण) र माला (जया बच्चन) उनका साथी बन्छन्। समाजको बेथिति र अन्याय सुधार्न हिँडेको युवा विजयभित्र एउटा ज्वालामुखी छ। उनले बाल्यकालमा भोगेका विगतले उनलाई आक्रामक बनाइराख्छ। विजय पात्रमा देखिने आगो त्यही विगतको ज्वालामुखीको राप हो।
'जंजीर' अमिताभको यही आक्रामक शैलीका कारण चर्चित बन्यो। शेर खानको भूमिकामा प्राणको बलियो चरित्र र गजब अभिनय हेर्न पाइन्छ। प्राणले मन्ना डेको स्वरमा गाउने 'यारी है इमान मेरा' बोलको गीत पनि 'जंजीर'को अर्को पहिचान हो।
जया बच्चनको भूमिका पनि विजय पात्रको उद्देश्य पूरा गर्ने सहायक पात्रका रुपमा आएको छ। फिल्ममा अजित मुख्य खलपात्रको भूमिकामा देखिन्छन्।
अभिमान (१९७३), निर्देशकः ऋषिकेष मुखर्जी
संगीतले जोडिएका दुई पात्रको कथा हो 'अभिमान'। संगीतकै कारण उनीहरुको सम्बन्धमा दरार पनि आउँछ। चर्चित गायक सुवीर कुमार (अमिताभ बच्चन) उमा (जया बच्चन) को सुमधुर गायकीबाट प्रभावित भएर आकर्षित हुन्छन्। एकअर्काको प्रेममा परेका यी दुवै गायक भए पनि संगीतलाई हेर्ने बुझ्ने उनीहरूको दृष्टिकोण फरक छ। सुवीर अरूलाई मनोरञ्जन दिन गाउँछन्। उमा भने आत्मिक आनन्दका लागि गाउँछिन्।
सुवीरकै करमा विवाहपछि गीत रेकर्ड गराएपछि उमाको चर्चा सुवीरभन्दा माथि पुग्छ। यसले उनीहरूभित्रको इखलाई मलजल गर्न थाल्छ। उनीहरूको प्रेम र सम्मानलाई अभिमानले जित्न थाल्छ।
गीतबाट सुरू हुने र गीतमै अन्त हुने 'अभिमान' सांगीतिक फिल्म हो, जसले संगीतकारको जीवन कथा संगीत विषयकै सेरोफेरो भन्छ। यसमा मजरुह सुल्तानपुरीको शब्द र एसडी बर्मनको संगीतमा 'मीत ना मिला रे मनका', 'तेरी बिन्दिया रे', 'तेरे मेरे मिलन कि ये रैना', 'लुटे कोइ मनका नगर बनके मेरा साथी', 'अब तो है तुमसे हर खुसी अपनी'जस्ता मीठा गीत सुन्न पाइन्छ।
फिल्ममा असरानी, बिन्दु र दुर्गा खोटे आदि कलाकार मुख्य भूमिकामा छन्।
सूक्ष्म विषयमा स्वादिलो फिल्म बनाउने ऋषिकेष मुखर्जीको 'अभिमान' मानव स्वभाव र सम्बन्धको चित्रण सुन्दर फिल्म हो।
दिवार (१९७५), निर्देशकः यश चोपडा
अमिताभको 'जंजीर'मा जन्मेको एंग्री यङ म्यान'को छविले 'दिवार'मा आएर पूर्णता पायो। 'जंजीर'मा इमानदार प्रहरीको भूमिकामा देखिएका अमिताभले 'दिवार'मा भने 'एन्टी हिरो' बन्ने जोखिम उठाए।
'दिवार'ले उनलाई बलिउडका सुपरस्टार बनाइदियो।
फिल्ममा मजदुर नेता आनन्द वर्मा (सत्येन्द्र कपुर) आफ्नो परिवारको सुरक्षाका लागि आन्दोलन रोकेर मजदुरको विपक्षमा सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन्। आनन्दको सम्झौताको बदला उनकी श्रीमती सुमित्रादेवी (निरूपा रोय) र दुई छोरा विजय (अमिताभ) र रवि (शशी कपुर) ले सामाजिक तिरस्कार र आर्थिक दुःख भोग्नु पर्छ।
कालान्तरमा एउटै आमाका यी दुई सन्तानमध्ये विजय गैरकानुनी गतिविधिमा लाग्छन् र रवि इमानदार प्रहरी बन्छन्। आमाले दुईमध्ये एकलाई रोज्नुपर्ने अवस्था आएपछि आमाले इमानदार छोरा रविलाई रोज्छिन्।
समय र नियतिले दाजुभाइलाई नै एक अर्काका विपक्षमा उभ्याइदिन्छ। आमा र दुई छोराको सम्बन्धमा कानुन र नैतिकता पर्खाल बनेर उभिन्छ।
सलिम–जावेदको दमदार पटकथा भएको द्वन्द्वप्रधान फिल्म 'दिवार'का धेरै संवाद चर्चित छन्। यसमा राम्रो-नराम्रो बीच मात्रै हैन, आफ्नैआफ्नै बीच पनि चर्को द्वन्द्व छ।
आदर्श आमाका रूपमा निरुपमा राय र आदर्श प्रहरीका रूपमा शशी कपुरले न्याय गरेका गरेका छन्। तर दर्शकको मुख्य ध्यान र मन समाजबाट तिरस्कृत बालक र पछि विद्रोही युवाको भूमिकामा देखिने अमिताभले जित्छन्।
'दिवार'लाई आजसम्म पनि अमिताभको सर्वाधिक राम्रो फिल्मका रूपमा चर्चा गर्नेहरू धेरै छन्। 'जंजीर' र 'दिवार'पछि नै अमिताभको 'युग' आएको। १९७० दशकमा बलिउडमा 'एन्टी हिरो' र एक्सन फिल्मको लहर ल्याउनमा पनि 'दिवार' मानक फिल्म बन्यो।
फिल्ममा परविन बाबी अनिताका रूपमा र भिरा नारङका रूपमा नितु सिंहको पनि मुख्य भूमिका छ।
'दिवार' प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएकै वर्ष सार्वजनिक भएको थियो। तत्कालीन समयको राजनीतिक अनन्तुष्टिको मुड र 'दिवार'का विजयको मुडमा धेरैले समानता देखे। समीक्षकहरूले पात्रको आक्रोशलाई आम मान्छेको आक्रोशको प्रतिविम्बका रूपमा पनि व्याख्या गरेका थिए।
त्रिशूल (१९७८), निर्देशकः यश चोपडा
अमिताभ बच्चन र शशी कपुरले धेरै राम्रा र सफल फिल्ममा सँगै अभिनय गरेका छन्। तीमध्ये 'त्रिशूल' पनि हो। संजीव कुमार, वहिदा रहमान, अमिताभ बच्चन, शशी कपुर, राखी, हेमा मालिनी, पुनम ढिल्लों, प्रेम चोपडा आदि फिल्ममा मुख्य भूमिकामा देखिन्छन्।
'त्रिशूल'मा पनि अमिताभको नाम विजय छ। भूमिका पनि 'एन्टी हिरो'कै।
राजकुमार गुप्ता (संजीव कुमार) करोडपतिकी छोरीसँग बिहे गर्न शान्ति (वहिदा रहमान) लाई धोका दिन्छ। प्रेमीले धोका दिए पनि शान्तिले बच्चा जन्माउँछिन्। अमिताभले फिल्ममा त्यही बच्चाको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
आमालाई धोका दिएकाले विजयमा आफ्नो बुबासँग बदला लिने इख हुन्छ। यसका लागि उनले कस्तो जुक्ति अपनाउलान्, यो जान्न फिल्म नै हेर्नुस्।
फिल्ममा शशी कपुर विजयको सौतेनी भाइ शेखर गुप्ता बनेका छन्। अरू फिल्ममा जस्तै 'त्रिशूल'मा यी दुई भाइबीच पनि रोचक प्रतिस्पर्धा र अनबन देख्न पाइन्छ। खय्यामको संगीतमा साहिर लुधियानवीको रचनाले फिल्मलाई अझ राम्रो बनाउन सघाएको छ।
शोले, १९७५ निर्देशकः रमेश सिप्पी
सलीम-जावेदले लेखेका एक्सन फिल्म 'शोले' को निर्माण गोपालदास सिप्पीले गरेका हुन्।
फिल्मको कथा दुई चोर जय (अमिताभ बच्चन) र वीरू (धर्मेन्द्र) बाट सुरू हुन्छ। उनीहरूलाई डाकु गब्बर सिंह (अमजद खान) सँग बदला लिन पूर्व पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह (संजीव कुमार) ले आफ्नो गाउँ रामगढ बोलाउँछन्।
ठाकुर जय र वीरूलाई डाकु गब्बर सिंहलाई पक्राउ गर्न प्रयोग गर्न चाहन्छन्। सरकारले गब्बर सिंहलाई प्रहरीकहाँ बुझाउनेलाई पचास हजार नगद इनाम राखेको हुन्छ। ठाकुरले जय र वीरूलाई गब्बरलाई पक्डिए थप बीस हजार इनाम दिने बताउँछन्।
पैसाको लोभमा यी दुई मिल्ने चोर साथी राजी हुन्छन्। उनीहरूले गब्बरलाई ललकार्छन्। फिल्म हेर्नुभएको छैन भने अब हेर्नुस्, के जय र वीरूले गब्बरलाई समात्छन्? के उनीहरूले पुरस्कार रकम पाउँछन्? फिल्ममा बसन्ती बनेकी हेमा मालिनी र राधा बनेकी जया भादुरीसँग उनीहरूको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ?
'शोले'लाई भारतीय सिनेमाको सर्वश्रेष्ठ फिल्ममध्ये एक मानिन्छ। यसले ब्रिटिस फिल्म २००२ को 'उत्कृष्ट १० भारतीय फिल्म' को एक सर्वेक्षणमा प्रथम स्थान पाएको थियो। २००५ मा ५० औं फिल्मफेयर पुरस्कार समारोहमा यो फिल्मले पचास वर्षकै सर्वश्रेष्ठ फिल्मको पुरस्कार पनि पाएको छ।
१५ अगस्ट १९७५ मा रिलिज भएको यो फिल्म बक्स अफिसमा सुपर हिट सावित भयो। फिल्मले त्यो बेला पूरै भारतका धेरै सिनेमाहलमा निरन्तर प्रदर्शनको रेकर्ड तोडेको थियो। मुम्बईको मिनर्वा थिएटरमा त यो पाँच वर्षभन्दा धेरै समय प्रदर्शन भइरह्यो।
जानकारीका लागि, पात्र गब्बर सिंह एक वास्तविक डाकुमा आधारित छ। १९५० दशकमा ग्वालियर आसपासका गाउँमा उसको आतंक थियो। यो भूमिकाका लागि पहिले डेनी डेन्जोंगपा छानिएका थिए। उनी तयार नभएपछि अम्जद खान गब्बर बनेका हुन्।
उसो त जयको भूमिका पनि शत्रुघन सिन्हाले गरून् भन्ने निर्देशकको चाहना थियो। उनी व्यस्त भएकाले मानेनन्। पछि सलीम-जावेदले नै 'शोले'मा अमिताभको नाम सिफारिस गरेका थिए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ६, २०७७, ०६:२८:००